CX na UX: ọdịiche dị n'etiti ndị ahịa na ndị ọrụ | Martech Zone
CX vesos UX: Ọdịiche dị n’etiti ndị ahịa na ndị ọrụ
Monday, March 7, 2016 Mọnde, Jenụwarị 23, 2017 Suzi Shapiro
CX / UX - Naanị otu leta dị iche iche? Ọfọn, karịa otu leta, mana enwere ọtụtụ myirịta dị n'etiti Ahụmịhe Ndị Ahịa na Ahụmahụ onye ọrụ ọrụ. Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-elekwasị anya ịmụ banyere ndị mmadụ site na nyocha!
Myirịta nke Ahụmịhe Ndị Ahịa na Ahụmịhe Onye Ọrụ
Ahịa na User Ahụmahụ ihe mgbaru ọsọ na usoro na-abụkarị ndị yiri. Ha abụọ nwere:
Echiche na azụmahịa abụghị naanị maka ire na ịzụrụ, kama ọ bụ maka igbo mkpa na inye uru mgbe ị na-enweta ego.
A nchegbu banyere nsogbu ndị na-eme mgbe anyị na-eme echiche na nkwanye ùgwù maka ike nke ezigbo data.
Mmasị na data anakọtara site na ndị ahịa ugbu a ma ọ bụ ndị nwere ike.
Pectkwanyere ndị na-eji ngwaahịa na ọrụ na ndị ahịa na ndị ahịa ùgwù.
Nkwenkwe na ndị nkịtị nwere ike inye ozi bara uru gbasara ngwaahịa na ọrụ.
Ihe dị iche iche nke ahụmịhe ndị ahịa na ahụmịhe onye ọrụ
Nnyocha Ahụmịhe Ndị Ahịa - Ọ bụ ezie na ndịrịta iche dị ka ọ kachasị maka usoro, data anakọtara nwere ike ịnye azịza dị iche. Nnyocha Ahụmịhe Ndị Ahịa na-ahọrọ data sitere na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ ịkọ omume omume nwere ike ịdị mgbe ọtụtụ ndị na-eme ụdị omume ahụ, jụọ maka echiche gbasara atụmatụ, ngwaahịa, ma ọ bụ akara ma na-anakọta azịza maka ajụjụ ụfọdụ. Mme owo ẹsiwak nditịn̄ se mmọ ẹkerede ẹnyụn̄ ẹtịn̄ se mmọ ẹkerede ke edi akpanikọ. CX research na-amuta ihe dika:
Ngwaahịa a na-amasị m.
Achọghị m njirimara ahụ.
Aga m azụrụ ngwaahịa ahụ ma ọ dị.
M ga-enye ya a 3 nke 5 na okwu nke ịbụ siri ike iji.
Aga m akwado ndị ọzọ ngwaahịa a.
Nke a bụ ozi bara uru!
Nnyocha Ahụmịhe Onye Ọrụ - UX nnyocha na-elekwasị anya na data anakọtara site na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị dị ka ezigbo ndị ọrụ nke ngwaahịa na ọrụ. A na-eme ọtụtụ nyocha na ndị mmadụ n'otu n'otu kama ịme otu ndị mmadụ. Jụ ajụjụ nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro ahụ. Isi ihe dị iche na nyocha ahụmịhe onye ọrụ bụ na a na-ahụ ndị mmadụ na ntọala ezi uche dị na ya ebe ha na-anwa imezue ọrụ ndị kwesịrị ekwesị. A na-elekwasị anya na omume, ọ bụghị naanị echiche, dị ka:
Ọtụtụ mmadụ nwere nsogbu ịchọta nbanye nbanye
Ndị mmadụ niile hụrụ nwere ike ịhọrọ ngwaahịa achọrọ.
Naanị otu onye n'ime ndị ahụ nwere ike mezue usoro ndenye ọpụpụ na-enweghị njehie.
Ndị mmadụ na-achọkarị atụmatụ ndị na-esonyeghị na atụmatụ ugbu a, dị ka ọrụ ọchụchọ.
Gịnị kpatara ọdịiche ndị a ji dị mkpa?
At Ike ndọda anyị maara na omume nwere ike ime ka anyị mata ihe ndị mmadụ ga-eme n’ezie. Ahụmahụ anyị mgbe anyị na-ekiri ndị mmadụ na-anwa iji ngwaahịa bụ na ha kwenyere na ha na-aga nke ọma, ọbụlagodi mgbe ha arụchaghị ọrụ ma ọ bụ omume n'ụzọ ziri ezi. Ndị ọrụ na-ekwu na ha na-ahụ ngwaahịa na-enye afọ ojuju ma ọ bụ dị mfe iji, ọbụlagodi mgbe ha nwere nsogbu mgbe ị na-eji ya. Ndị ọrụ na-ekwukarị ọgba aghara na nkụda mmụọ, mana ụta onwe ha maka nsogbu ha na-eji ngwaahịa. Omume ha anaghị adaba na ihe ha na-ekwu.M na-ekwenye na omume ahụ!
Ndị ahịa na-azụta ngwaahịa na ọrụ. Ndị ọrụ na-eme mkpebi, hụrụ n'anya ma ọ bụ kpọọ aha gị asị, nwee mgbagwoju anya, jiri ngwaahịa gị kwa ụbọchị, zụta ihe wee bụrụ ndị ahịa na ndị ahịa.
N'ihi na anyị na-aga n'ihu na-amụta site na ibe anyị, echere m na usoro CX na UX na usoro nchịkọta data ga-aga n'ihu na-agbakọta / jikọtara ọnụ. Ebumnuche bụ otu ihe n'ọtụtụ akụkụ - iji mepụta ngwaahịa na ọrụ bara uru, nke bara uru ma na-adọrọ mmasị
na iji kọọrọ ndị ahịa ha uru ha bara.
Anyị na-anọgide na-enwe ọtụtụ ihe anyị ga-amụta!
Tags: ahụmahụ ahịacxomume njirimaraahụmahụ onye ọrụnyocha onye ọrụux
Suzi Shapiro Monday, March 7, 2016 Monday, January 23, 2017
Suzi Shapiro ejirila ndụ ya niile na-amụ maka etu ndị mmadụ si arụ ọrụ na otu esi eji ozi a mee ka ndụ ha ka mma. Suzi nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ dị ka prọfesọ Psychology na Informatics mahadum na dịka Onye nyocha Ahụmịhe Onye Ọrụ ma soro ndị mmadụ na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, site na Teknụzụ na Ego na Ahụike na Mmụta. Suzi dị ugbu a onye isi ọkachamara na onye ọrụ ọkachamara na Ike ndọda. Omume Ahụmịhe Ndị Ọrụ Ha nwere ike melite usoro, ọrụ na ngwaahịa. Ọ bụkwa ọrụ maka ịzụlite ọzụzụ maka ndị chọrọ ịkwalite ọrụ Nhazi Ahụmịhe ọrụ na ụlọ ọrụ ha.
Olee otu ndi nchoputa si hu ma pinye aka na ihe nchoputa nke Google
Wzọ 5 maka ndị ọhaneze na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji meziwanye oghere ha
Onyedika chibuike (@onyediegwu)
Mar 8, 2016 na 8: 16 AM
Ihe na-akpali mmasị na-ewere Suzi. Yabụ na ọ dị ka ọ dị ka UX karịa "ọmụmụ microscopic" na CX karịa "ọmụmụ microscopic". Nke ahụ ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na m na-akọwara gị otu ihe ahụ nke m ga-ekwu maka akụnụba ma ọ bụ ọkà mmụta ihe banyere ihe ndị dị ndụ?
Mar 24, 2016 na 8: 44 PM
Okwu gị mere ka m chee echiche! Daalụ.
Ka m jiri ihe atụ ọzọ na-aga (Site n'inwe obi ụtọ na nke a bụ ihe nzuzu na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ziri ezi maka ndị ọkachamara niile, CX OR UX.)
Ọtụtụ ndị na-ekwu na ha na-eme CX dị ka ndị na-ahụkarị ihe nke na-ekiri ụmụ anụmanụ na zoo.
Ha na-echegbu onwe ha naanị n'ihe ha nwere ike ịmụta gbasara "omume zoo" (iji ngwa ahịa ma ọ bụ zụta ngwaahịa ha ozugbo).
Ha na-arụ nnukwu ọrụ nke idekọ ihe omume na gburugburu ebe a na-achịkwa, mana ha nwere ike ịdabere na anụmanụ ahụ nwere ike iru site na ogwe osisi (Dịka nyocha ndị ahụ nwere ike ịhụ mgbe ị na-eji websaịtị.) Ma ọ bụ gụọ oge ụfọdụ (Mkpesa, Net Promoter Scores, wdg)
Ha na-ahọrọkwa ehi karịa otu onye.
Achọrọ m iche na ndị mmadụ na-eme UX ọ bụghị naanị na ha na-aga zoo, (Anyị na-amụ ọtụtụ ebe ebe ahụ) mana anyị na-achọ ịpụ n'oké ọhịa iji leba anya na gburugburu "okike".
Mgbe anyị na-ajụ ase maka ihe ndị gbara anyị gburugburu, anyị nwere ike iso otu onye were otu ụbọchị ma ọ bụ karịa.
E nwere nza nke ihe anyị nwere ike ọ bụghị mgbe niile na-edebe na "ọhịa", otú ahụ ka anyị na-enye ụmụ anụmanụ mgbagwoju anya dozie (a ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ) wee na-ele ihe ha na-eme mgbe ha na-agbalị iji dozie nsogbu bara uru (lelee mgbe na-ahọpụta a ngwaahịa ).
Ahụrụ m UX dị ka:
* Ngwaọrụ zuru oke.
* Ihe e mesiri ike banyere omume na nyocha.
* Ogologo oge karie otutu.
Kedu ihe ị chere?